နယူးဇီလန်တွင် အပူဆုံးကာလများ အဖြစ် ယခုနှစ် ကြုံတွေ့နေရ - Yangon Media Group
နယူးဇီလန်တွင် အပူဆုံးကာလများ အဖြစ် ယခုနှစ် ကြုံတွေ့နေရ
အော့ကလန်၊ မတ် ၆
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် နွေရာသီအပူဆုံးဒီဂရီအဖြစ် နေ့လယ် ပျမ်းမျှ ၁၈ ဒသမ ၈ ဒီဂရီဆဲလ်စီး ယပ်စ်အဖြစ် တိုင်းတာရရှိရပြီး ယခင်အပူဆုံးဒီဂရီထက် ၂ ဒသမ ၁ ဒီဂရီဆဲလ်စီးယပ်စ်ပိုမိုနေသဖြင့် စံချိန်တင်အပူဆုံးကာလများ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု အမျိုးသားရေနှင့် လေထုတိုင်းတာရေးသုတေသနဌာန (NIWA) အကြီးအကဲဖြစ်သူ ခရစ်(ခ်)ဘရန်ဒိုလီနိုက မတ်လ ၆ ရက်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
နယူး ဇီလန်တောင်ဘက်ဒေသများတွင် ၃၈ ဒသမ ၇ ဒီဂရီဆဲလ်ဖီးယပ်စ် တိုင်းတာရရှိခဲ့သည်။ ယင်းသည် ၁၉၀၉ ခုနှစ်မှစတင်ကာ အပူဆုံးဒီဂရီအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရာသီဥတုပူပြင်းရခြင်းမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိရပြီး ယခုနှစ် အဖို့တွင်မူ လာနီညာရာသီဥတုဖြစ်စဉ်သည်လည်း အကြောင်းတစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်ဟု ဘရန်ဒိုလီနိုက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
ရာသီဥတုပူပြင်းလာသော ကြောင့် နယူးဇီလန်အစိုးရသည် လယ်သမားများအား ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကို သတိထား စိုက်ပျိုးနေကြရန် နှိုးဆော်မှာကြားခဲ့သည်။ နေမှုဖြစ်သည်။ နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်ဂျာစင်ဒါအာဒင်က မိမိအနေဖြင့် နယူးဇီလန်ရာသီ ဥတုပူပြင်းခြင်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ကြုံခံစားရခြင်း ဖြစ်သည်ဟူ၍ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ မိမိအနေ ဖြင့် ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကာဗွန် လျှော့ချနိုင်ရေးကိုလည်း ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဟူ၍ ထုတ် ဖော်ပြောဆိုလိုက်သည်။
မီချီဂန်ုပြည်နယ်တွင် လူဖြူအမျိုးသား ရေးဝါဒီတစ်ဦး မိန့်ခွန်း မပြောမီ လူ ၁၂ ဦးကို ဖမ်းဆီး
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရုပ်ရှင်လောကသားများ၏ စွမ်းဆောင်မှုအပေါ်သာ အဓိကမူတည်ြေ??
ဒုတိယမြို့တော်ဝန် အပါအဝင် ကော်မတီဝင်များကို ပြည်သူရွေးချယ် တင်မြှောက်နိုင်မည့် စည်ပင်သာယ?
Black Panther မှာ မိမိနှင့် ဂါဘွန်ကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း အူဘာမီယန် ဆို
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ အောင်လအန